शवमाथि राजनीति शुरु, कसरी उठ्छ बालिकाकाे शव ? |
शवमाथि राजनीति शुरु, कसरी उठ्छ बालिकाकाे शव ?
प्रकाशित मिति :2018-06-13 14:51:24
ललितपुर । १० वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको ठहर गर्दै विश्वराम रनपैलीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोमबार सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गर्यो ।
छोरीले न्याय नपाएसम्म दाहसंस्कार नगर्ने अडानमा बसेकी बालिकाकी आमा मुद्दाको फैसलापछि छोरीको शव बुझ्न मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगिन् ।
तर १३ महिनासम्मको शुल्क तिर्न नसकेपछि छोरीको शव त्यहि छोडेर उनी घर फर्किईन् । २०७३ जेठ ५ गते बालिकाको हत्या भएको थियो । त्यस यता उनको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शव गृहमा छ ।
यो अवधि १३ महिनाको भइसकेको छ । १३ महिना शव गृहमा शव राखे बापत दैनिक एक हजार रुपैयाँका दरले उनले कुल ३ लाख ६५ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद श्रेष्ठले बताए ।
सामान्य मजदुरी गर्ने नेपालीसँग कुल ३ लाख ६५ हजार शुल्क तिर्ने क्षमता छैन । उनले भनिन्, ‘मसँग एक हजार छैन । त्यत्रो रकम कसरी तिर्नु ?’
डा. श्रेष्ठका अनुसार अस्पतालले उनीसँग अर्को प्रस्ताव पनि राखेको थियो ‘पूरै शुल्क मिनाहा गर्न सकिँदैन । सकेको रकम दिनु ।’
उनले महिला खबरसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘म दिनदिनै ज्याला गरेर जीवन धान्ने मान्छे । मसँग अहिले एक हजार रुपैयाँ पनि छैन भनें ।’
साथमा रकम नभएपछि उनी छोरीको शव नहेरी घर फर्किइन् । व्यक्ति व्यक्तिबाट रकम उठाएर अस्पताललाई तिरेर छोरीको दाहसंस्कार गर्ने उनको चाहाना छैन । रकम तिर्न हात रित्तो छ । श्रीमान छन्, तर उनीसँगै छैनन् । वास्ता गर्दैनन् । दोस्रो विहे गरेर अलग बसेका छन् ।
उनका अरु २ छोरा छन् । ज्याला मजदुरी गरेर २ छोरालाई हुर्काइरहेकी छिन् । ‘म छोरीको अन्तिम संस्कार गर्न सबैसँग पैसा उठाएर भार बोक्न चाहन्न’ उनले भनिन्, ‘सरकारले नै लाग्ने पैसा मिनाहा गरिदिए हुन्थ्यो ।’
उनले आफूलाई परेको समस्या दलित आयोगले हेरिदिन्छ कि भन्ने आशा राखेकी छिन् । उनले आफू दलित समुदायको भएकोले दलित आयोगमार्फत सरकारलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने बताइन् ।
तर अस्पतालले सबै रकम मिनाहा गर्न नसक्ने जनाइसकेको छ । ‘हामीलाई पनि मृतकका परिवारसँग यति पैसा देउ भन्दै पीडा थप्न त मन छैन । तर, शव राख्ने फ्रिज मर्मत गर्ने रकम अस्पताललाई कतैबाट आउँदैन’ डा. श्रेष्ठले महिला खबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘सरकारले शव राख्दा लागेको खर्च बेहोरिदियो भने हामीलाई झन् सजिलो हुन्छ ।’
बालिकाकी अामाकाे अार्थिक अवस्था कमजाेर भएकाे थाहा पाएपछि सरकारबाट सहयाेग हुनुपर्नेमा विवेकशिल साझा पार्टीका सदस्यहरु गई ३० प्रतिशत रकम तिरेर शव निकाल्न दिन सहमती गरे ।
बालिकाकी आमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल जाँदा उनीसँगै ५ जनाको समूहमा युवाहरु पनि थिए । डा. श्रेष्ठले शव लागेको शुल्क पूरै नसके सकेको जति तिर्नु भनेपछि विवेकशिल साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शना सहित गएका युवाका टोलीले ३० प्रतिशत शुल्क तिर्ने बताए ।
प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद श्रेष्ठसँग ३० प्रतिशत रकम दिएर शव लैजाने सहमती पनि भयो । त्यसपछि उनीहरु निस्किए । त्यसको केही क्षणमा अर्को टोली महिला पुगे ।
प्रा. डा. श्रेष्ठले महिला खबरसँग भने, ‘मैले त पहिला आउनेहरु मृतक बालिकाको आफन्त होलान् भन्ने ठानेको थिएँ । तर, पछि आउनेहरुले शवमाथि राजनीति गर्ने ? भनेर प्रश्न पो गरे । त्यसपछि बल्ल मैले विवेकशिल साझा पार्टीका युवाहरु रहेछन् भन्ने थाहा पाएँ ।’
दलित अधिकारर्मीहरुसहित गएका टोलीले भने गृह मन्त्रालयको पत्र लिएर आएपछि शव लैजान दिनु भनेका डा. श्रेष्ठले बताए ।
बालिकाकी आमासँगै अस्पताल गएका विवेकशिल साझा पार्टीका सदस्य अमृत विष्ट भने आफूहरु पार्टीको तर्फबाट नभइ व्यक्तिगत रुपमा अस्पताल गएको बताउँछन् ।
‘बालिकाको घर नजिकै मेरो घर छ । उनको कान्छो छोराको विद्यालयको शुल्क पनि हामीले तिरिदिएका छौं ।’ विष्टले भने, ‘घर नजिकैको दिदी भएकोले हामीले व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्न लागेका हौं । यसमा पार्टीको कुनै निर्णय छैन । न त हामीले पार्टीगत रुपमा सहयोग गर्न लागेका हौं ।’
मलाई केही थाहा छैन – प्रमुख, दलित आयोग
दलितहरूको हक, हित तथा उनीहरूको समस्यामा साथ दिनको लागि संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय दलित आयोग छ । तर, दलित आयोगका प्रमुख भने आफूले गर्ने जिम्मेवारीमा नै प्रष्ट छैनन् ।
दलित आयोगका प्रमुख ध्रुवप्रसाद कोइरालालाई घटना विवरण सुनाएर दलित आयोगले के गर्न सक्छ ? भनी सोध्दा उनले भने, ‘तपाईंहरू सिधै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुस् ।’
महिला खबरबाट उनलाई अझ प्रष्ट्याएर हामीले समाचारको लागि तपाईंलाई सम्पर्क गरेको भन्दा उनले थपे, ‘म दलित आयोग आएको ३ महिना मात्रै भयो । मलाई पनि यहाँबाट के के गर्ने भन्नेबारे पुरा जानकारी छैन ।’
घटना बुझिसकेपछि पनि उनले बालिकाको शवलाई वेवारिसे भन्दै ‘वेवारिसे शवको दाहसंस्कार गर्ने हेर्ने गृह मन्त्रालय हो, सिधै उतै जान भनिदिनु’ भने ।